Yakachipa yakakwenenzverwa aluminium chiwanikwa musuwo uye hwindo kugadzira zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Aluminium alloy musuo uye hwindo extrusion
Mumakumi mashoma emakore, iyo indasitiri yakashandisa tekinoroji yepamusoro kusimudzira kugadziridza kwemaindasitiri, kusimudzira chigadzirwa kuvandudza, kurongedza mashandisirwo esainzi netekinoroji, uye yakadzora gadziriro nedanho repasi rose repamberi. yangu nyika aluminium musuwo uye hwindo rekuvaka keteni madziro indasitiri yakawana kusimudzira kusimudzira. Aluminium alloy madhoo nemahwindo ndicho chigadzirwa chekuvandudzwa kwezvazvino zvigadzirwa zvekuvaka. Iwo akave akagadzirwa munyika dzakabudirira senge Germany, United States, uye United Kingdom kutanga kuma1930. Nekuti aluminium alloy profiles ari akareruka muchinhu, anogona kuburitsa maprofiles ane akaomesesa echikamu-chikamu maumbirwo, kunyanya aluminium Kuonekwa kwakanaka kwemakoneti emikova nemahwindo uye yavo yakanaka kuvaka zvivakwa zvakavaita vakasimbiswa nevakagadziri.
Aluminium chimiro maficha
Aluminium profile corrosion resistance: Kuwanda kwealuminium profile inongori 2.7g / cm3, iri inenge 1/3 yehukuru hwesimbi, mhangura kana ndarira (7.83g / cm3, 8.93g / cm3, zvichiteerana). Pasi pemamiriro ezvinhu mazhinji ezvakatipoteredza, kusanganisira mweya, mvura (kana mvura yemunyu), petrochemical uye mazhinji masystem emakemikari, aluminium inogona kuratidza yakanakisa ngura kuramba.
Aluminium profile kuitisa: Aluminium profile inowanzo sarudzwa nekuda kwayo kwakanakisa kuitisa. Pamusoro pehuremu hwakaenzana, kuitisa kwealuminium iri padyo ne 1/2 yemhangura.
Thermal conductivity: Iyo yekupisa conductivity yealuminium alloy ndeye 50-60% yemhangura, iyo inobatsira mukugadzira kweanopisa zvinopisa, evaporator, midziyo yekudziya, midziyo yekubika, uye mota humburumbira misoro uye ma radiator.
Isiri-ferromagnetic: Aluminium profiles haisi-ferromagnetic, chinova chinhu chakakosha kumagetsi emagetsi nemaindasitiri. Aluminium profiles haisi yekuzvimiririra inogona kutsva, izvo zvakakosha kune zvinoshandiswa zvinosanganisira kubata kana kubata nezvinhu zvinopisa uye zvinoputika.
Kushanda: Iko kushanda kwemaaluminium profiles kwakanakisa. Mune akasiyana akaremara aruminiyamu alloys uye akakanda aruminiyamu alloys, pamwe neakasiyana matunhu aya maalloys ane mushure mekugadzirwa, iwo machining maitiro anosiyana zvakanyanya, izvo zvinoda yakasarudzika michina maturusi kana tekinoroji.
Kugadzikana: Iyo chaiyo tensile simba, goho simba, ductility uye inoenderana nebasa kuomesa mwero inotonga shanduko mukutenderwa deformation.
Kugadziriswa patsva: Aluminium inogadziriswazve, uye hunhu hwesimbi yakadzokororwa ingangove isinganzwisisike kubva kune yekutanga aluminium.
Yakagadziriswa aruminiyamu chiwanikwa musuwo uye hwindo extrusion zvikamu
Kushandisa Shanduri, evaporator, midziyo yekudziya, midziyo yekubika, uye mota silinda misoro uye ma radiator, nezvimwe.
Pashure: Electroplated aruminiyamu chiwanikwa michina zvikamu
Zvadaro: CNC hwokugaya hwakabvira Stainless simbi zvikamu